Noocyada isuduwidda ➤ lagu arko Kulanka Aduunka March
Bogga ugu weyn » Noticias » Wargeysyo » Noocyada isuduwidda ➤ lagu arko Kulanka Aduunka March
18 / 07 / 2019 08 / 06 / 2019 by Antonio Gancedo
Shirkii Isuduwidda Aduunka ee IIaadkii Dunida ee loogu talogalay Nabadda iyo Dagaal-la'aanta
20 ee Abriil ee 2019 waxaa lagu dabaaldagay macne wacyigalin ah, iyadoo la adeegsanayo barnaamijka video videoconferences ZOOM falanqaynta noocyada isuduwidda waddanka marka ugu horeysa ee shirka II Bisha March ee Nabadgalyada iyo Dagaal-la'aanta.
Wadar ahaan wadamada 44 waxay ka qaybqaameen node-ka iyo / ama u direy warbixino.
Kulammada noocyada isuduwidda ee soo socda ayaa looga dooday:
Xaaladaha dalalka iyo saxda ah ee jadwalka.
Waxyaabo kala duwan: Web, Telegram, RRSS, iwm.
Kulanka xiga ee xiga.
Ka-qaybgalayaasha node iyo / ama u diraan warbixinno:
Europe: Spain, Jarmalka, Ireland, Belgium, Faransiiska, Switzerland, Slovenia, Bosnia H, Croatia, Serbia, Greece, Italy iyo Vatican.
Asia, Oceania iyo Australia: Ciraaq, Japan, Nepal, India, Australia.
Total: Dalalka 44.
Ujeedadu waxay tahay in ay dhaqdhaqaaqyo horay usocdaan wadamada 75 ee magaalooyinka 193.
1.1.1 28 ama 29 ee Sebtember: EVA-Espacio Vecinal de Arganzuela
1.1.2 Xarumaha loogu talagalay soo dhaweynta Martiiyada ee Plaza Mayor ama Plaza España ama Cibeles
1.1.3 Laga soo bilaabo 1 illaa Oktoobar 20 (20 maalmood)
1.1.4 Hawlaha kale ee la qorsheeyay
1.2.1 2018. Abaabulka Dunidu Maarso Sida Looga Duwan yahay Dhaqaalaha, C. Maktabadda Bulshada ee Monte Alto, Maktabada Castrillón, Asalka Popolis
1.2.2 2019. Abaalmarinta Adduunka ee March ee Xarunta Bulshada ee Os Mallos
1.2.3 Waxqabadyada taariikhda soo socota
2 Afrika: 17 dal - 24 magaalo
2.2.1 Oktoobar-2019: Dhalashada Dunida Maarso March iyada oo loo marayo jasiiradaha Canary.
2.7 Benin iyo Togo
2.9 Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo
2.10 Wadamada kale ee Afrika
2.10.1 Macluumaadka waxaa loo diraa wadamada soo socda
3 Ameerika: 22 dal - 85 magaalo
3.1.1 Casuumaad la leh noocyada isuduwidda ayaa loo direy inta badan kooxaha iskaa wax u qabso ee magaalada.
3.2.1 Qaramada Midoobay
3.4.1 Waxaanu leenahay qaybo kala duwan
3.4.2 Dib u eegida noocyada isuduwidda ee Mashruuca Rugaha
3.4.3 Tallaabooyinka lagu fulinayo dhacdooyinka doorashada
3.8.1 Warbixinta dareenka dhaqameed ee Dunida Labaad ee Maarso Dowladda
3.10.1 Barrancabermeja (E. Promoter mas'uul ka ah Anthony iyo Melba)
3.10.2 Medellín (E. Dhiirrigeliye mas'uul ka ah Elex iyo Gloria)
3.10.3 Cali-Popayan-Pasto-Cartagena-Tunia-Cucuta-Bucaramanga-Ipiales-Ermeniya-Neiva (magaalooyinka 10)
3.10.4 kuwa kale
3.11.1 Guayaquil leh ka qaybqaadashadan noocyada isuduwidda
3.11.2 Buste leh hawlahaas
3.12.1 Fariin ka timid Venezuela
3.14.1 Hawlaha dalka
3.14.2 Kooxaha Dhiirrigelinta ee Maxaliga ah
3.14.3 Hawlaha taageerada
3.14.4 Falimaha Rasuullada
3.14.5 Wadooyinka Isku-dhafka ah
3.14.6 Dhacdooyin kale
3.14.7 Dhaqdhaqaaqa Bulshada iyo Ururada Wadashaqeyn iyo Taageero
3.14.9 Warbaahinta iyo Farqiga
3.14.10 Shabakadaha Bulshada
3.14.11 Calaamadaha Xabsiyada iyo Nabadgelyada qiyaasaha kala duwan
3.14.12 Samatabbixinta tabarucaadka Nabadgalyada iyo Dhibaatooyinka ku habboon dalka
3.14.13 Sii aragnimooyinka khilaafaadka iyo waayo aragnimada danta gaarka ah ee dalka
3.14.14 Fikradaha iyo mowduucyada xooggan ee lagu xoojinayo dalka sida ay u kala duwan yihiin
3.14.15 Dhaqaalaha iyo iskaa-u-maalgelinta
3.15.1 La xiriir hay'adaha
3.18.1 Waxaa jiri doona labo dhacdo oo waaweyn oo dalka ka dhaca
4 Oceania-Australia-Aasiya: 7 dal - 17 magaalo
4.6 Strip ee labada Korea
4.9.1 Waxaan qorsheyneynaa inaan qabano hawlahaas Nepal
4.9.2 Waxqabadka Kooxda Tababarka ee Caalamka Labaad Maarso ee Nepal
4.9.3 Kooxda Base waxay u guuri doonaan magaalo kale haddii ay macquul tahay.
4.9.4 Waxay noqon lahayd mid aad u wanaagsan haddii Sudhir iyo Nailesh ay labaduba ka qaybqaataan Kooxda Base ee Nepal
4.10.3 Qodobada iskaashiga ee noocyada isuduwidda waa in lagu qeexo si faahfaahsan.
5 Yurub: 29 waddan - 57 magaalo
5.8.1 Wadada Bariga-Galbeedka
5.8.2 Wadada North North
5.8.3 Waddo kale oo suurtagal ah
5.8.4 Koox Tababar
5.8.5 Mediterranean, Badda Nabadda
5.10 Mediterranean: Badda Nabadda.
5.11.1 Shirka diirada lagaga soo horjeedo dagaalka iyo rabshad la'aan
5.11.2 Dhamaadka bisha Agoosto ee 2019, oo ay weheliso kooxo kale iyo dadweynaha
5.11.3 Waxaan warqad rasmi ah u dirnay Xog-hayaha si aan u sheegno noocyada soo jeedinta isku-duwidda
5.12 Wadamada kale ee Yurub
6 Maaddooyinka lagu fududeeyo noocyada isuduwidda caalamiga ah iyo arrimaha kale
6.1.1 Liiska luqadaha
6.1.2 Waxaan dhamaystirnaa wajiga hubaysan ee webka. Ka dib markii la dhammeeyey marxaladan waxaanu ku dabaqi doonaa mawduuca RRSS.
6.2 Shabakadaha Bulshada
6.3 Kulanka sanadka soo socda si looga wada hadlo noocyada soo socda ee isuduwidda caalamiga ah
El LEVINTH OF THE 2ª World March 23 ama 24 ee bisha Sebtembar ayaa lagu qaban doonaa magaalada Madrid.
Qolka Shirka Saxaafadda wuxuu noqon karaa mid ka mid ah dhismaha Cibeles ama kan Guriga Bakery. Muddada 12 ee 14 (2h).
Taageerada dhaqdhaqaaqa ee socdaalka Baaskiilada si ay u taageeraan 2ª World Maarso on 28 bisha September.
(EBA) Waxay ka baxaan 28 / 9 11s ka Legazpi oo waxay maraan degmada Arganzuela, sida ay sameeyeen sanado kale.
28 ama 29 ee Sebtember: EVA-Espacio Vecinal de Arganzuela
Musikada / dhaqanka / gastronomic oo leh kooxo ka kala yimid gobollo kala duwan oo dunida ah (waxaa jira kooxo Afrika iyo Koonfurta Ameerika).
Inta u dhaxaysa 2 iyo 8 ee Oktoobar: Calaamadaha Aadanaha kulliyadaha Spain. Ololaha caalamiga ah ee magaalooyinka waawayn oo leh noocyo kala duwan oo isuduwid caalami ah
2 bisha Oktoobar: Ogolaanshaha safarka xaafadaha magaalada ilaa laga bilaabo 16: 00h:
Plaza Atocha - Calle Atocha - Antón Martin - Plaza de la Provincia - Duqa magaalada Plaza 1,5 km.
Plaza España - Calle Bailen - Duqa Magaalada Calle - Duqa Magaalada Plaza 1,4 km.
Puerta de Alcalá - Cibeles - Seville - Sol - Duqa Magaalada - Duqa Magaalada Plaza 1,8 km.
Xarumaha loogu talagalay soo dhaweynta Martiiyada ee Plaza Mayor ama Plaza España ama Cibeles
18: 30 Soo dhaweynta Maarso ee xaafadaha. Waxaan u baahannahay marxalad ficil ah iyo xaflad.
19: 30 Calaamadda Aadanaha ee Nabadgalyada iyo Dagaal-la'aanta. Meel bannaan oo ballaaran.
20: 30 Bandhigyada muusikada iyo riwaayadaha yar-yar ee 'Footprints'. Magacyada suurtagalka ah ee loogu talagalay daawashada: Maqaarka iyo lafaha, Muerdo, Leonor Watling, Rozalén, Ismael Serrano, Jorge Drexler, Langui, Macaco.
Laga soo bilaabo 1 illaa Oktoobar 20 (20 maalmood)
Showroom si loo soo bandhigo waxyaabaha soo socda:
Sawirro iyo fiidiyowyo "World March".
Fiidiyowyo iyo Sawirro "Calaamadaha Aadanaha ee iskuulada Madrid".
Waraaqaha “Referents of-rabshadaha” Gandhi, ML King, Silo…
Bandhigyada Haweenka leh Laba Dheeman: "Dhaawacyo", "Fiiri jidka kale".
Hawlaha kale ee la qorsheeyay
La qabsiga ciyaaraha OCA
App ee 2ª World March
Unugga Waxbarashada ee Dugsiyada 2ª March March
Goobta suurtogalka ah ee lagu rakibayo sawirka ama lakabaadda xusuusta ka bixitaanka II March.
Waxaan soo jeedineynaa booska El Matadero. Gaar ahaan wareega wareegga albaabka, ka dambeysa albaabka Plaza de Legazpi.
Haddii aysan suurtagal ahayn, garoonka plating ee Skating Rink Madrid Río.
2018. Abaabulka Dunidu Maarso Sida Looga Duwan yahay Dhaqaalaha, C. Maktabadda Bulshada ee Monte Alto, Maktabada Castrillón, Asalka Popolis
Calaamadda Aadanaha Nabadda ee dhacdooyinka Campus for Peace iyo Xuquuqda Gabbaadka.
Qeybinta qoraallada Dunida oo aan lahayn Warsame ku saabsan Dunida Maarso.
Baaritaanka dukumintiga "Tupac Amaru, waxbaa isbedelaya" Bibli. Castrillón.
Sawir "Samba, magac magaciisu yahay erase la yiraahdo" oo ah Ascas Cunuga.
Hadal - colloquium on Hubka Nuclear-ka Maktabada Castrillón.
Soo bandhiga golaha joogtada ah ee Dhibaatada aan firfircooneyn ee ka jira jaaliyada Agra. Waxaa qoray Ricardo Lucero
2019. Abaalmarinta Adduunka ee March ee Xarunta Bulshada ee Os Mallos
Colegio Fernández Latorre (600 oo arday iyo deris ah), Talk - colloquium "Ka baxsiga rabshadaha, baahi shaqsiyeed iyo mid bulsho" oo uu soo saaray Philippe Moal.
Tababarka ku saabsan Non-rabshad ee ururka Propolis.
Calaamadda Aadanaha ee Nabadda iyada oo la akhrinaayo Ballan-qaadka Agaasinka Plaza de María Pita (ardayda 300).
Ansixinta Miisaaniyadda Dawladda ee Mooshinka si loo ansixiyo Heshiiskii Mamnuucidda Hubka Hubka Nukliyeerka ah.
Aqoon-is-weydaarsi Xildhibaanka Golaha Degaanka ee Propolis.
Baaqa Aqoonsiga ee Golaha Magaalada A Coruña oo ku salaysan 2ª World March ee Nabadda iyo Dagaalka aan-dib-u-dhaca iyo ku dhawaaqidda 2 Oktoobar XNUMX oo ah Maalinta Shidaal Xoogan ee A Coruña.
Abaalmarinta Adduunka ee Maarso ee Sphera Academy.
Aqoon-is-weydaarsi Xaalad aan rabshad lahayn oo ka dhex jirta ururada xaafada Agra.
Waxqabadyada taariikhda soo socota
26 April 2019 Sanduuqa Bulshada ee Iskuulka Nabadgalyada iyo Dhaqan-darrada ee Promenade iyada oo la kaashanayo xarumaha waxbarasho ee 8 iyo ardayda 3.500.
May 9: Abaalmarinta Adduunka ee Maarso ee Ventorrillo Neighborhood Association.
6 ee Juun: Ururada bulshada ee magaalada Sagrada Familia.
21 ilaa 23 ee Juun: Iskuday Xeryaha Nabadgelyada iyo Xaqqa Hoyga, oo leh aqoon-isweydaarsiyo ku saabsan rabshad la'aan.
September 5: 2ª wacan ugu yeerista jaaliyadaha magaalada ee kuyaal Citizenship Ciudad Vieja.
Oktoobar 2: Calaamadda Aadanaha Nabadda ee Plaza de María Pita iyo isdhexgalka xiriirka bilowga Madrid ee 2ª World March ee Nabadda iyo Dagaalka
Soo jeedinta Calaamadaha Aadanaha ee Nabadda ee xarumaha waxbarashada ee magaalada Máis de 3.500 oo ah ardayda dhigata dugsiyada A Coruña waxay sameeyaan caddaymo bini aadaminimo si ay u dalbadaan nabadda iyo xasilloonida.
Tax Haven: Waxqabadka aragtida iyo khalkhalka.
Afrika: 17 dal - 24 magaalo
Intii lagu guda jiray safarka Martineeya ee bariga Morocco iyo iyada oo loo marayo dhaqdhaqaaqyada ayaa abaabulay mahadnaqa Miloud iyo Azzedin.
Xiriiro ayaa la sameeyey dhowr kooxood oo ka mid ah qaababka noocyada isuduwidda caalamiga ah, taas oo horseedi karta soo jeedin ku saabsan waxqabadyo (eeg warbixinta lagu soo diray liiska).
Dhowr usbuuc waxay safar kale u noqon doontaa Morocco.
Oktoobar-2019: Dhalashada Dunida Maarso March iyada oo loo marayo jasiiradaha Canary.
Ka faa'iideysiga marxaladda Caalamka ee Maarso Maarso halkan, waxaanu ku dhiirrigelinaynaa waxa noqon doona Kulanka Waxbarashada Nabadgalyada ee 1aad.
Waxay ku lug leedahay xarumo waxbarasho oo tiro badan waxayna hubiyaan inay sii socdaan.
Danta ayaa ah, in mustaqbalka, ay noqon doonto goob kulan oo loogu talagalay dhammaan kuwa xiiseynaya horumarinta ciribtirka dhammaan noocyada rabshadaha ee waxbarashada.
3 shirar macquul ah ayaa ka qaybgalay.
Waxay sugayaan in ay qeexaan waxqabadyada la taaban karo.
Dakar, Keba DIOP waxay la xiriirtay saddex iskuul oo waxay dooneysaa in ay wadajir u keento maalin maalmo aan rabshad lahayn oo ay sameeyaan astaamaha dadka.
Iskuduwaha waxaa lagu sameeyay dugsiyada kale ee gaarka loo leeyahay oo la soo bandhigay.
Waxa kale oo ay sahamisaa suurtogalnimada hindise iyo calaamad aad u weyn oo aadanaha ah.
Ka-qaybgalayaasha kale: Ndiaga DIALLO Association Diretti bani-aadmiga, Cheikh DIOP, Samba X Théâtre Sensibilisation, Papis BADJI.
Martine wuxuu bilaabay inuu mashruucaas u fidiyo ardayda yaryar.
Waxay ka qaybgalaan sheeko. Kordhinta qeexida hawlaha ku saabsan noocyada isuduwidda. Mamut Jange
Benin iyo Togo
Guddi loogu talagalay bilaabista World Second March ayaa la sameeyay.
Shaqadan lagama maarmaanka ah ayaa noo ogolaatay inaan aragno aragti cad oo ah ujeeddooyinka aan u dajinnay nafteena:
Abaabul tartan kubada cagta ah oo loo yaqaan "PEACE FOR A BETTER FUTURE".
Tani waxay u ogolaan doontaa kooxaha Benin iyo Togo inay tarto laba bilood oo ay ku tartamaan labada waddan ayna kor u qaadaan wacyiga mabaadiida ficil aan rabshad lahayn.
Hel iskuulada ku filan kuna sameeya ciyaaraha. Waxaanu qorshaynaynaa tallaabooyinka lagu soo jiito dad badan.
Dareenka warbaahinta si ay ugu dedejiyaan boosaska faafinta rabshad iyo ficilada loo baahan yahay in la fuliyo si loo abuuro nabadda adduunka.
Ku soo dhawow safarkan waxqabadka cayaaraha leh farshaxanno martiqaad ah iyo helitaanka calaamadaha nabadda ee nagu caawin doona.
Nota: Waxaan jeclaan laheyn isuduwidda caalamiga ah ee adduunka labaad ee Maarso si ay u fududeeyaan hawshayada shaqadayada ee naga caawisa inaan helno:
Dukumiintiyada rasmiga ah ee aan tusi karno haddii loo baahdo si aynaan u jahwareerin habka aan ula dhaqanno amar bulsho, maaddaama dalalka oo dhan ay ku jiraan xaalad xiisad iyo masuuliyiin ka tuhunsan wax kasta.
U dir warqad gobol kasta si aad ugu sharaxdo mashruuca.
Raadi qalabka lagama maarmaanka u ah safarkaan.
Iyadoo farxad weyn ayaan soo dhaweynay mashruucan sharaf leh oo aan dooneyno inaan ku guuleysano.
Waxaan sidoo kale jeclaan lahaa wafdiga caalamiga ah in ay booqdaan Benin iyo Togo.
Waxaan sugeynaa xaqiijin si loogu dhawaaqo jadwalka tallaabooyinka kala duwan ee lagu go'aamiyey isku-duwidda caalamiga ah.
Ujeedada ayaa sheegaya in xiriirada horay loo aasaasay Dhalinyarada Qaranka ee Afrika iyo ururo kale si ay isugu diyaariyaan dhacdo Abuja ah.
Waxay waydiisanaysaa nooc ka mid ah dukumiintiga rasmiga ah ee ku saabsan noocyada isuduwidda caalamiga ah si loo fududeeyo xiriirka maamulka.
Waxa uu ka qaybqaatay sheeko wuxuuna u diray faallooyinkaan ku saabsan Congo DRC:
Dalka Congo, ma jirto nabad dhab ah ama dagaal dhab ah. Tani waa saldhig wanaagsan oo loogu talagalay kuwa doonaya in ay dhisaan dagaal.
Sidoo kale waa saldhig nagu filan oo doonaya in aan dhisno nabad.
Marka la eego 2ª World March, dadka ku ballanqaadaya inay waxtar u leeyihiin ma hayo ballanqaadyadooda.
Si kastaba ha noqotee, nasasho ayaa xaqiijiyay in xogta (qoraal + sawirada) loo diri doono si joogto ah ugu yaraan magaalada magaalada Lubumbashi.
Waxaan rajeyneynaa in magaalooyinka kale ee Congolese ay nagu soo biiri karaan.
Macluumaadka waxaa loo diraa wadamada soo socda
Tunisia iyo Ghana
Mozambique: Macluumaadka waxaa loo diraa iyaga. Remigio CHIALAUE ayaa ku xiran
Kenya: Waxay ka qaybgaleen sheeko. Waxaa loo diraa macluumaadka: Ben Oko
Ameerika: 22 dal - 85 magaalo
Waxaa jiri doona kulan shabakad kooxeed ee heerarka Latin America ee adduunka ee Maarso gudahood qaababka noocyada isuduwidda ee halkan lagu soo bandhigay.
Kooxda Dhiirrigelinta: Pablo Acevedo iyo Gabriel Vergara.
Bishii Abriil ee 2018 waxaanu ka qaybqaadannay Marwada Labaad ee Maarso xilliga Guga Doorashooyinka.
Halkaan waxaan ku soo aragnay xogta 40 (40).
Waxaan u soo dirnay dhowr email oo macluumaad ah iyo hal qof ayaa la weydiistey macluumaad dheeraad ah oo kor u qaaday ciyaaraha bulshada oo lagu magacaabo CONSENSUS oo ku saabsan xalinta khilaafaadka.
Waxaan soo dirnay casumaadyo kooxo tiyaataro ah oo magaalada ah, Masraxa Periscope ayaa ogolaaday inuu kaqeybqaato.
Casuumaad la leh noocyada isuduwidda ayaa loo direy inta badan kooxaha iskaa wax u qabso ee magaalada.
Waxay u direen emails dhowr hay'adood oo ka mid ah ardayda ka dambeysa dugsiga sare si ay u waydiistaan ​​inay u sheegaan warbaahintooda martiqaadka inay abaabulaan waxqabadyo marxaladda martida.
Waxay ka qaybgaleen munaasabadda Maalinta Dhulka iyadoo fariin ah in rabshaduhu aaney ahayn mid dabiici ah: iyada oo aan dagaalo jirin wax hub ah oo nadiif ah.
Waxay ka qaybgalayaashu qaybiyeen waraaqo.
War saxaafadeed ayaa loo qaabeeyey si loo codsado boosaska iyo in lagu martiqaado in lagu abaabulo waxqabadyo marxaladda martida.
Maalinta Sabtida, 27 / 4 ayaa mar kale ka soo qayb gali doona dhacdada Primavera de los Alternativas si ay u raadsadaan xiriiryo.
N.York, Los Angeles. Macluumaadka ayaa la diray
Toogashada M. Luther King Washington. Hélène Park.
Soo dhawaynta QM ee Qaramada Midoobay ee N. York.
Dhacdooyinka "Ansixinta Qaramada Midoobay".
Dhacdada xuduudaha Maraykanka Xuduudaha malaa'igta ayaa ka qaybqaatay dhowr joornaal.
Cibaadada Heshiiska Tlatelolco.
Magaalada, Antigua, Esquipulas. Mixco,
Xiriirinta EP Alberto Vásquez.
Marka la eego Guatemala doorashooyinka guud ee bisha Juun.
Tallaabooyinka qaarkood ayaa diiradda saaraya diyaarinta.
Waxaa jira muran dhexmara hay'adaha dawladda, sida Maxkamadda Sare ee Doorashooyinka iyo Maxkamadda Dastuurka iyo Laanta Garsoorka ee diiwaangelinta musharixiinta lala xiriirinayo kooxaha ka ganacsiga daroogada.
Dhamaan arrimahan ma caawimayaan in ay wax ka qabtaan diyaarinta 2ª World March ee Nabadda iyo Rabshad la'aanta ee dalka.
Iskuxidhinta Kooxda Dhiirrigelinta March ee loogu talagalay Nabadda iyo Dagaal-la'aanta.
Isbahaysiga u dhexeeya dadka iyo ururrada ayaa lagu hormariyay noocyada isuduwidda si loo xoojiyo kooxda dhiirrigelinta.
Waxaanu leenahay qaybo kala duwan
Ururada Bulshada Rayidka ah, DiverArte, Ururada la xiriira Bulshada Isgaarsiinta.
Sidoo kale, Ururada Ardayda, iyo Jaamacadda Qaranka, Estudiantina ee Jaamacada San Carlos ee Guatemala, Dawladaha hoose sida Degmada Mixco.
Dib u eegida noocyada isuduwidda ee Mashruuca Rugaha
Booqo Waaxda Quetzaltenango (200 km oo ka timid magaalada caasimadda) dib u soo celinta xidhiidhada si loo hubiyo marinka Kooxda Base ee degmadaan.
Degmadda Chiquimula, xiriirrada ayaa dib loo bilaabay si dib loogu soo celiyo tallaabooyinka, mar kale dib u qaad, tusaale ahaan Munaasabada Adduunka ee Maarso, oo lagu dhisay galbeedka magaalada.
Meelaha ay kooxdu u kala qaybsanaan doonto inay tagaan Santa Rosa de Copan Honduras iyo La Paz, El Salvador.
Tallaabooyinka lagu fulinayo dhacdooyinka doorashada
Dhacdooyinka xarumaha waxbarashada, Calaamadaha Nabadda.
Forumyada, falanqaynta iyo goobaha doodda.
Shir goboleed oo ay abaabuleen DiverArte.
Isu-uruurinta iyo dib-u-eegista dukumentiyada.
Aqoonsiga hindisaha sharciga soo bandhigay ee Guurtada si loo ansixiyo Heshiiska Xakamaynta Hubka Nukliyeerka.
Tababarka dugsiga 60 kaas oo hagaajin doona dhismaha calaamadda nabadda, iyada oo carruurta ka socota dugsiyada ku yaala xuduudda Honduras iyo Guatemala, marka la helo 2ª World March.
Ururka ardayda caafimaadka ee jaamacadda qaranka ee UNAH iyo laba jaamacadood oo madaxabannaan ah ayaa abaabulaya isugeynta 2ª World March, safarkooda ku yaalla Central America.
Degmooyinka Omoa iyo San Pedro Sula, waxay go'aansadeen in ay ka qaybqaataan 2ª World March, iyada oo dad badani ay abaabulaan dadweynaha.
Qabashada sadex macallin oo isku xigta jaamacadaha San Pedro Sula oo ku saabsan mawduucyada la xiriira nabadda adduunka.
Leon, Managua. Waxay helayaan macluumaad.
San José, San Pedro de Montes de Oca, Liberia iyo Heredia.
Ururada ka shaqeynaya Kooxda Dhiirrigeliyaha Bartamaha: Isbeddelka Hawlaha Fududinta Waqtiyada leh, Saaxiibada Xarunta Nabadda.
Waxaana lagu daray, Qeybta Ka-hortagga Rabshada ee Ololaha Bileyska ee Degmada PAIN-V ee 11 Dugsiyada iyo Kulliyadaha (illaa iyo hadda).
Tababarka Macalimiinta iyo Ardayda.
Hawlaha farshaxanka iyo calaamadaha dadka ee Maalinta Caalamka Nabadda 21 / 9.
Dabbaaldegga maalinta 2 / 10 ee aan ahayn rabshad iyo tegitaankii adduunka labaad ee Maarso.
Warbixinta dareenka dhaqameed ee Dunida Labaad ee Maarso Dowladda
Waxqabadyada Inta lagu jiro marxaladda adduunka labaad ee Maarso.
Madasha Caalamiga ah ee "Doorka ciidamada ee qarnigii XXI". (Sugitaanka oggolaanshaha dowladda).
Dhaqdhaqaaqyada carruurta 1000 ee qaxoontiga Caruurta. (Qorsheynta).
Concert for Peace ee Parque de la Democracia. (Qorsheynta).
Calaamadaha aadanaha ee ardayda, xarumaha waxbarasho ee kala duwan iyo beeraha magaalooyinka qaarkood. (Qorsheynta).
Ka qaybqaadashada barnaamijyo dhowr ah iyo waraysiyo saxaafadeed, Raadiyaha iyo TVga. (Qorsheynta).
Is-dhexgalka EPP iyo shirarka labadii asbuuc ee Arbacooyinka ee CAP-ka 5p.m.
Gudaha Panama, World Without Wars iyo Rabshad la'aan Rikoorada Belkis de Gracia oo sannadkii tagay ku qabtay Forum at Jaamacada Interamerican ee Panama.
Inta udhaxeysa dhammaadka Sebtembar iyo bilawga Oktoobar ee sanadkan, waxaan ku qaban doonaa hal jaamacad maxalli ah (meel, taariikh iyo waqti la xaqiijiyo).
Khudbadaha waxaa lagu casuumay inay kaqeybgalaan Madasha: "Dhaqanka Nabadda, Colaadaha aan rabshadaha lahayn, ixtiraamka carruurta iyo dabeecadda si wanaagsan oo loo yaqaan Panama", iyada oo lagu xusayo qaab dhismeedka Maarso II ee Nabadda iyo Colaadda. Waxay awoodi doonaan inay nala wadaagaan macluumaadka ku saabsan asalka iyo macluumaadka ay u tixgeliyaan inay ku habboon yihiin waxa ku dhacay bini-aadamnimada iyo tabarucyada kale ee la xiriira noocyada isuduwidda.
Sii wad wadashaqeynta dugsiyada 40 ee nagu taageeray Koonfurta Amerika March. Tababaro aan firfircooneyn oo aan firfircoonayn, murugo, sawirro ku dhajiya mawduuca, calanka sare, sheekooyinka iyo qoraallada, calaamadaha nabadda ee qaybta iyo socodka.
Astaanta nabadda waxaa lagu qabanayaa Plaza de Bolívar oo dadka loogu yeerayo 5000.
Hirgalinta riwaayad weyn oo loogu talagalay nabadda iyo rabshadaha.
Barrancabermeja (E. Promoter mas'uul ka ah Anthony iyo Melba)
Shirkadda Unipaz (Jaamacadda) iyo SENA.
Marin weyn oo magaalada soo gasho dadka 2000.
Xiriirka waxaa la samayn doonaa hay'ado xuquuqda aadanaha oo ay ka shaqeynayeen bilihii ugu horreeyay oo ay ku dhowyihiin calaamad weyn oo nabad ah.
Ku martiqaad xubin ka tirsan Kooxda Tababarka si aad uga qaybqaato B / ca shirarka iyo calaamadda.
Waa lagama maarmaan in la xaqiijiyo taariikhaha.
Medellín (E. Dhiirrigeliyeha masuulka ka ah Elex iyo Gloria)
Carnival of the culture: dhammaan wada-xaajoodka hoos ugu Medellín ee comparsas ilaa march ee dhex maraya magaalada.
Wadahadal ku saabsan jaamacad ku saabsan nabadgelyo iyo rabshad la'aan.
La xiriir xiriiriyaal dowladeed, masuul ka ah Xuquuqda Aadanaha iyo wixii la xiriira.
Cali-Popayan-Pasto-Cartagena-Tunia-Cucuta-Bucaramanga-Ipiales-Ermeniya-Neiva (magaalooyinka 10)
Iyaga dhexdooda, meelo kasta oo ka mid ah magaalada ayaa lagu qaboojin doonaa calaamadaha iyo calaamadaha nabadda.
La xiriir dugsiyada
Wadahadal ku saabsan rabshad aan ka jirin jaamacadaha iyo machadyada.
Barrancabermeja, waxaa loo qaabeeyey si ay hal ama labo qof oo EB uga qeybqaataan hawlaha magaalada iyo goobta Kolibri Park.
Andrés Salazar iyo Marly Arévalo ayaa doonaya in ay soo jeediyaan qeyb ka mid ah EB oo ka baxa Madrid iyo Spain.
Waxaan sameyn doonnaa funaanado, boorar, boodhadh, waraaqo loo diro hay'adaha, jaamacadaha iyo kulliyadaha iyo waxa lagama maarmaanka u ah fidinta Bisha Labaad ee Adduunka.
Waxaa xiriir la leh hay'adaha dowladda, Xuquuqda Aadanaha, aasaaska iyo hay'adaha ku lug leh isla dhiirigelinta nabadda iyo rabshad aan firfircooneyn.
Marka laga eego suurtogalnimada helitaanka Kooxda Tababarka ee Dunida Maarso waxaa jira magaalooyinka 2.
Guayaquil leh ka qaybqaadashadan noocyada isuduwidda
Jaamacadaha: U. de Guayaquil iyo U. Casa Grande.
Horyaalka ciyaaraha isboortiga dhalinyarada.
Dugsiyada qaar iyo degmada Guayaquil.
Buste leh hawlahaas
Isku-dubaridaha Isku-duubka Pan-American.
Ecuador-Manta: Aqoonsiga magaalada Manta-Ecuador si loo xiro saldhig milatari.
Fariin ka timid Venezuela
Halkan Venezuela, isgaarsiinta, labadaba telefoon iyo internetka, guud ahaan, waxay ka socdaan falalka argagixisada ee madadaalo, aad u deggan.
"Tusaale ahaan"Faallo ka bixiyahayaga,"Waxaan haystaa laba toddobaad iyada oo aan lahayn xiriirka gacanta, ama WhatsApp. Iyo dad badan".
Si kastaba ha ahaatee, waxaan sugeynaa, inkasta oo aynaan wax badan qaban. Waxaa jira qaylo badan oo la xiriira arrimaha siyaasadeed ee qaranka iyo kuwa caalamiga ah.
Paramaribo Waxay helayaan macluumaad.
Recife, Minas, São Paulo, Cubatão iyo Caucaia.
Tababaraha: Gunther A., ​​Marcos R., Jobana M., Régis M., Rosana B. iyo Vinícius P., Rosana B. iyo Fernando P.
Waxaan qiimeynay in marxaladdii ugu horreysay ay saameyn weyn ku yeelatay warbaahinta, dhaqdhaqaaqyada waaweyn ee Bahia iyo Pernambuco.
In ka badan kun qof oo 3 ah ayaa la soo xiriiray shabakadaha internetka iyo shabakadaha bulshada waqtigan.
Qaar badan oo ka mid ah xiriiriyahan ayaa dib loo soo celiyay taniyo Koonfurta Ameerika ee 2018.
Mashruucan labaad wuxuu mudnaanta koowaad siin doonaa shaqada calaamadaha nabadda ee dugsiyada iyo dhacdooyinka iyo shirarka loogu talagalay rabshadaha.
Kooxaha Dhiirrigelinta ee Maxaliga ah
Ilaa iyo hada waxaan leenahay Kooxaha Promoters ee 2ª March ee magaalooyinka 5.
Hawlaha waxaa lagu xaqiijiyaa Recife, Minas, São Paulo, Cubatão iyo Caucaia.
Wali lama xaqiijin Rio.
Waxa kale oo suurtagal ah in Curitiba iyo Rio Grande do Sul leeyihiin hawlo.
Waxaan taageero iyo ballan ka mid ah meelaha Xarunta Dhaqanka ee São Paulo, ee UMAPAZ (Universidade Livre samayn Meio Ambiente e da Paz) iyo xoghayayaasha Waxbarashada ee Cotia iyo Pernambuco ah hawlaha jimicsi iyo dugsiyada.
Jaamacado kala duwan ayaa lala xiriirayaa, sida: Dugsiyada, Jaamacadaha iyo Xafiisyada Waxbarashada.
Magaal kasta waxay yeelan doontaa ficil dhexe oo ka duwan.
Faahfaahinta waxay u baahan tahay in lagu caddeeyo magaalo kasta.
In San Paulo hadlay oo ku saabsan sameynayo dhacdo Xarunta Dhaqanka iyo Cubatão Astaanta a of Peace leh wadada dhexe 300 alumnos.La Recife qiyaasay lahaa in maalin 03 07 of December, Sao Paulo 8 11 si / dec., Paraisópolis / 12 14 si maalmood Mina / dec., 15 in 18 Caucaia / dic.Este waa isku day jadwalka hore loo baahan yahay in wax laga beddelo, bedeli karaan magaalooyinka, meelaha, taariikhaha iyo waqtiyada.
Wadooyinka Isku-dhafka ah
Waxaan qorsheyneynaa inaan samayno jimicsi ardayda oo ku dhamaato calaamadaha nabadda ee dugsiyada, jimicsiyada ama garoomada ciyaaraha yaryar.
Laga soo bilaabo October 2 waxaan soo jeedin doonaa dhawr nooc oo ah isuduwidda in tiro ka mid ah ciyaaraha, bulshada iyo ururada diinta ka hor si ay u bilaabaan samaynta hawlo ku salaysan koox ee ugu danbeysay, iyo, halka ay suurto gal, waxaa ka mid ah a khadadka wada.
In São Paulo Rasuullo qaar ayaa leh sawir muujinaya bandhig iyo shirweyne Umapaz.
Pressenza iyo 4V qorshe ay sameeyaan barnaamijyo taxane ah oo videos gaaban iyo inay faafiyaan iyo kaadhka warbixinta todobaadle ah oo ka mid ah Iswaafiqida Dhaqammada marcha.La qorsheynaya in xafladaha dhaqanka la dumarka soo galootiga ah, muusig iyo / ama joogitaanka xoog leh ee March oo ka mid ah seminaaro Inmigrantes.En Recife iyo koorsooyinka tababarka ee ardayda iyo macalimiinta la samayn doonaa rede dadweynaha.
Taageerada hay'adeed: Ilaa hadda, waxa ay diiradda saartay xidhiidhada xoghayayaasha waxbarashada, qolyaha dawladda hoose iyo jaamacadaha.
Dhaqdhaqaaqa Bulshada iyo Ururada Wadashaqeyn iyo Taageero
Waxaan xiriir la leenahay ururada iyo dhaqdhaqaaqyada taageeray 1F World March ee Brazil, sida Machadka Pólis, Sou da Paz, Soka Gakkai, Unipaz iyo kuwo kale oo badan.
Qaar ka mid ah ayaa horeyba ugu soo biiray howlaha South American March ee lagu qabtay 2018.
Weli wali ma helin wakhti aan ku soo aruurinno arimahan, laakiin waxaan heysanaa hoy adag iyo qalabka 4V ee soo bandhigi kara dhacdooyinka, iyada oo qaar dadka qaar la gudbin karo.
Warbaahinta iyo Farqiga
Waxaan leenahay liiska warbaahinta si loo soo diro wargeysyada, 6 ama 7 wada-hawlgalayaasha warbaahinta, laakiin weli waa lagama maarmaan in la sameeyo koox ka kooban tifaftirayaal si ay u noqdaan kuwo saxafiyiin ah oo ay u diraan tiro xadidan.
Waxaan lahaan doonnaa qoraaga Pressenza ee SP iyo daraasadda 4V oo ah taageerada taageerada ah ee lagu diyaarinayo qoraallada noocyada isuduwidda
Waa lagama maarmaan in dib loo soo celiyo shabakadaha 2ªMarcha Mundial Facebook, Twitter, Instagram, web, telegram, iwm.
Calaamadaha Xabsiyada iyo Nabadgelyada qiyaasaha kala duwan
Illaa iyo hadda waxaa jira laba magaalo oo doonaya inay sidaa sameeyaan: Cubatão e Cotia.
Waxaan la xiriiri karnaa iskuulo kale waxaanan dooneynaa inaan ku dhigno qalabka sharraxaadda ee Bortuqiiska.
Samatabbixinta tabarucaadka Nabadgalyada iyo Dhibaatooyinka ku habboon dalka
Markii ugu horraysay waxaanu isweydaarsannay deeqaha Paulo Freire, Maria da Penha, Augusto Boal, Chico Mendes iyo Marielle Franco.
Sii aragnimooyinka khilaafaadka iyo waayo aragnimada danta gaarka ah ee dalka
Currently ee Brazil ay aad u xoog badan arrinta dulmiga bilayska iyo dagaalka daroogada, si ay ugu qiil-gelinta ee bulshooyinka saboolka ah iyo cadaadinta mudahaaradkoodii, Maxaabiista mass, decontrol hubka sita, rabshadda jinsiga yihiin, sii kordhaya waan necbahay hadalka, lagu hayo ama xeer ilaalinta ee dhaqdhaqaaqa siyaasadeed iyo soo horjeeda dowladda iyo dilka dadka madow ee ubucda iyo wadaniga ah oo duurka ku.
Fikradaha iyo mowduucyada xooggan ee lagu xoojinayo dalka sida ay u kala duwan yihiin
Jacaylku wuu ka dhammaan doonaa nacaybka.
Dhaqaalaha iyo iskaa-u-maalgelinta
Wali ma aan awoodin in aan faahfaahin ku sameyno miisaaniyadda March ee Brazil, waxaan bilaabi doonaa hadda May.
Waxaan ka wada hadalnay olole ballaaran.
Arrimaha, ficilada ama khilaafaadka laga yaabo in ay kor u kiciyaan ama ay wax ka qabtaan heer gobol ama heer caalami: Iskaashiga Brazil ee la leh Israel, si loo iibsado hub.
Iyo bixinta saldhig milatari ee Alcantara ee USA.
Tumbes, Piura, Lambayeque (dadka ka yimid Chachapoyas iyo Yurimaguas), Trujillo, Huaraz, Lima, (magaalooyinka 15).
Kooxaha Horumarinta ee Peru waxaa sameeya Carlos Degregori, Luis Mora, Mariela Lerzundi iyo Riccardo Marinai.
Wadada EB waxay noqon doontaa waddada dhamaan magaalooyinka. Waxaa laga yaabaa in loo qaybiyo kooxo dhowr ah.
La xiriir hay'adaha
Degmooyinka (Magdalena, Surco, Miraflores), Wasaaradda Waxbarashada Cañete (kooxaha 300 dugsiyada), College of nafsiga ee Peru, sare-xirin Cities, Jaamacadaha (Ricardo Palma: Casa de la Cultura Korihuasi, U. Toribio National Rodriguez de Mendoza, U. César Vallejo) School of Dalxiiska ee Jaamacadda Qaranka ee Tumbes, Piura Task Group, Dawlad-goboleedka ee Lambayeque, Xafiiska Gobolka ee Waxbarashada Arequipa, bani Barayaashu Network Group Dhaqanka Yurimaguas.
Maaddooyinka: Horumarinta: xargaha, xayiraadda, xayawaanka, boodhka, dhejiyeyaasha, waraaqaha, waraaqaha, waraaqaha.
Nota: Waxaanu haynaa magaalo kasta. Waxaan soo jeedineynaa noocyo kala duwan oo isuduwid ah si kor loogu qaado dhaqdhaqaaqyada marxalad kasta. Waxaan leenahay xarun dhexe ee Lima, oo ay bixiso Jaamacadda Ricardo Palma.
Hawlahaasi waxay xoogga saareen daabacaadda iyo soo gudbinta waraaqaha marti-gelinta dugsiyada sare iyo dugsiyada hoose ee Sopocachi ee La Paz. Laga bilaabo bilawga Luulyo, isuguyeynta waxaa loo qaban doonaa macallimiinta iyo ardayda isla degaanka.
Faahfaahinta hawlaha la qabtey weli lama helin.
Xarunta Daraasada Silo waxay ka bilaabantay faafinta hawlaha Dunida Maarso. waxay bilaabi doonaan dhaqdhaqaaqyada isdhexgalka bisha Luulyo.
Waxay ku jirtaa marxaladda ugu horreysa ee ururka, iyada oo ay ku jiraan horumariyayaal ku yaal gobollada 8: Salta, dhowaan CABA.
Hawlaha faafinta ee Parque Lezama, Gobolka Buenos Aires iyo CABA; inta soo hartay waa hawlaha xiriirka iyo raadinta ka mid noqoshada.
Waxaa jiri doona labo dhacdo oo waaweyn oo dalka ka dhaca
Aqoonsiga hooyooyinka iyo awoowe ee Plaza de Mayo sida soo jeedinta halgan aan sal iyo raad lahayn.
Qabiilka Silo. Labada hab ee ururka
Waxaan horeyba u haysannay Adeeynta Wasaaradda Waxbarashada ee Cordoba iyo caddaynta danta Dowlad-Goboleedyada ayaa la farsameeyaa.
Ficil yar ayaa loo qorsheeyay gudbinta buugga Koonfurta Ameerika ee Maarso, Milagros Sala ee Jujuy.
Waxaan la xiriirnay safaaradaha Cuba, Venezuela iyo Bolivia ee Buenos Aires, waxaanay ka qeyb qaadatay falalka isbaheysiga dadka reer Venezuela ee Cordoba.
Kulan-Aqoonsiga Hooyooyinka iyo Awoowe ee Maajo.
Guri u dirista Mario R. Cobos - Silo oo uu ugu deeqay rabshado la'aan.
P. de Vacas: 2 / 1 / 2020 Dabbaaldegga sanad-guurada 10 ee 1F World March.
Waxay bilaabaan in ay yeeshaan kulamo ku saabsan noocyada isuduwidda.
Waxay xiiseynayaan sidii ay u kobcin lahaayeen dad cusub oo lagu daray hawlaha.
Waxay qorsheynayaan inay u safraan dhammaan gobollada Chile si ay kor ugu qaadaan arrintan kor u qaadidda kooxaha asaasiga ah.
Waxay ku taageeri doonaan soo saarida qalabka noocyada kala duwan ee daboolaya noocyada ururka iyo ficilada.
Fikradda ayaa ah in la isku keeno dadka si ay u awoodaan inay sii wadaan sii wadidda socdaalka adduunka ee March marxaladaha soo socda.
Sidoo kale Chile, si kor loogu qaado taageerada TPAN (Heshiiska Mamnuucidda Hubka Nukliyeerka) oo hore u sii waday xildhibaannada, haddana waxay u sii wadi doontaa degmooyinka.
Waxay ka shaqeyn doonaan koox cilmi-baara oo horumariya barnaamijyada cilmi-baarista.
Oceania-Australia-Aasiya: 7 dal - 17 magaalo
Dib ula xirriir xidhiidhada 1ª World March.
Aqoonsiga New Zealand oo ah wadan wadan aan hubka lahayn.
Damaashaadka 10 ee sanadguuradii 1F ee Maarso Maarso.
Sydney: Shaqada ayaa socota sidii loo abaabulay kulan ku saabsan WM ee Sydney.
Iyadoo la tixgelinayo suurtagalnimada in tallaabo laga qaado xeebta WM passport, sida IWM. Decler wuxuu mas'uul ka yahay Kooxda Horumarinta.
Waxaan isku xireynaa xiriirka 1ª World March
Nailesh ayaa u safray Japan, waxaana ay xoojisay xiriirka jaamacadeed.
Waxa kale oo ay xoojinayaan xiriirrada Maareynta Nabadgalyada, ICAN iyo kuwa 1ª March ee March.
Dhibbanayaasha dhibbanayaasha ee Hiroshima iyo Nagasaki ee Japan.
Waa inaan dib u xiranno xiriirka 1F World March.
Strip ee labada Korea
Waa inaan dib u xirannaa xiriirka 1ª World March.
Dhacdada xuduudda Koonfurta iyo Waqooyiga Kuuriya.
Wuxuu kula soo xiriiri doonaa. Waxaa xiiso leh in 2ª World March ay soo maraan Shiinaha.
Waxaa jira ujeedo lala xariirayo kuwa ka qeyb galay 1ª World March
Tulsi Sigdel iyo Kabir Ranjit waxay u shaqeeyaan iskuduwayaasha. Marka la barbar dhigo 3 Nepali waxay ku sii jiri doontaa Madrid 2 ee Oktoobar 2019.
Magaj Bd Panthi iyo Sharada Prashad Dhital waxay doonayaan inay Madrid ka dhigaan wadada Africa sida EB.
Waxay qorshaynayaan 5 iyo 10 dhex Nepalis u safreysa Madrid dhamaadka World March 8 / 3 / 2020 ah.
In Nepal waxaan dooneynaa in aan abaabulo Golaha Qaran ee Bini-aadamnimada.
Waxaan ka shaqaynaynaa barnaamijka labaad ee Maarso Maarso ee dugsiyada, jaamacadaha iyo ururrada si looga qaybgalo.
Waxaan aragnaa jawaab aad u wanaagsan oo kuxiran oo ku xiran noocyada isuduwidda.
Waxaan qorsheyneynaa inaan qabano hawlahaas Nepal
Kulamada heerka jaamacada Kathmandu, Banepa, Panauti, Biratnagar.
Waxaa jira wada hadal dhexmara iskoolka Kathmandu iyo Kavre.
Forum of Humanism (oo ka mid ah ururada 50 ee go'aansaday danahaaga).
Tilmaan ka hor bisha 1 ee hawlaha kooxeed ee Nepal.
Wareegtada marxaladda Wargeysyada Caalamiga ah ee Maarso ee Wargeyska Qaranka ee Wargeysyada oo daabacan maalin kasta 15 kasta.
Qoraalka iyo Banner of World March ee Nepali iyo Ingiriisi.
Waxqabadka Kooxda Tababarka ee Caalamka Labaad Maarso ee Nepal
Maalinta 1aad - Kooxda Saldhigga waxay gaadhaa Nepal. Dood wadaag iyo nasasho
Maalinta 2 - Maarso Adduunka ee Panauti, 9:00 ilaa 11:00, qado, laga bilaabo 1:00 illaa 3:00 kulan oo ka dhacaya hoolka degmada Banepa. Ku noqo Kathmandu)
Kooxda Base waxay u guuri doonaan magaalo kale haddii ay macquul tahay.
Waxaan rajeyneynaa inaan ogaano socodka Biratnagar iyo fursadaha kale ee magaalooyinka sida Bhaktapur iyo Kirtipur.
Maalinta 3aad - Maarso Adduunka ee Kathamandu City Hall ama National Stadium.
Waxay rajeynayaan 500 inay dadka 700 ka soo jeeda dhammaan hay'adaha (iskuul, jaamacad iyo ururo).
Maalinta 4aad - Shirka Qaranka (waxaad fursad u leedahay inaad ku joogto Lumbini adoo hadiyado ka helay warbaahinta qaranka).
Waxaan baran doonaa suurtogalnimada in aan sameyno socodka xerada xadka ee Sagarmatha (Everest).
iyo Maalinta 5 - Sii wad safarka N. Delhi-India.
Waxay noqon lahayd mid aad u wanaagsan haddii Sudhir iyo Nailesh ay labaduba ka qaybqaataan Kooxda Base ee Nepal
Sidoo kale laga soo xigtay Nepal waxaan xiiseyneynaa inaan la midoobno ​​Kooxda Tababarka ee Hindiya.
Waxaanu diyaar u nahay in aan u fidinno raashin iyo raashin aan u hayno xubno ka tirsan Kooxda Tababarka.
Tulsi Sigdel / Kabir Ranjit ee Nepal
Waxaan bilaabay in hawshu ay astaan ​​nabadeed ee dugsi ku yaal Kannur la 200 boqolaal ardayda iyo macalimiinta ayaa sidoo kale ka qeyb galay in iskuulka.
Wareeggii ayaa la socday heesta “Waan ka adkaan doonnaa…” oo ay ku heesayeen kooxda ardayda.
Waxaan u turjunnaynaa qoraalkeena rasmiga ah luuqada 'Malayalam'. Waxaan ka sameeyay daabacado midab leh buugyaraha.
Waxyaabo kale oo muhiim ah ayaa ahaa Kooxda Dhiirrigelinta ee degmada Jannie. Ka qaybqaadashadu waxay ahayd mid wanaagsan oo xiiso leh.
Wuxuu ka qaybqaatay kulammada caalamiga ah ee ku saabsan noocyada isuduwidda.
Luqaddeena “Malayalam” ha ka muuqato barta caalamiga ah.
Tilmaamaha iyo dhacdooyinkayaga waxaa lagu dhejin karaa bogga internetka.
Nailesh Masuulka ah.
Waan la xiriiri doonaa dugsiyada iyo kulliyadaha. NSS 15,000 waxay ku biiri doonaan 2WM (Ururada ay dhiirigeliso Gandhi iyo dadka ka yimid ururada diinta).
Xiriir ayaa laga sameeyey Mumbai oo leh Ekta Parishad.
Ekta Parishad. Tan iyo noocyada isu-duwidda caalamiga ah ee March Adduunka 2ª waa in xiriir la Ekta Parishad iyo qabanqaabiyeyaasha March Jai Jagat.
Waxaan leenahay heshiis ah nooca wadashaqeyn. Waxay taageeri doonaan 2 World March iyada oo loo marayo Hindiya waxaanan ku taageeri doonaa Yurub.
Qodobada iskaashiga ee noocyada isuduwidda waa in lagu qeexo si faahfaahsan.
Dhacdada New Delhi ee 30 / 1 / 2020: sannadguuradii geerida Gandhi.
Yurub: 29 waddan - 57 magaalo
Munich iyo Berlin.
Bishii Febraayo Sandro wuxuu ka qeybgalay Friedenkonferenz ee Munich si uu ugu dhawaaqo 2-da Maarso Adduunka waxaan abaabulnaa munaasabad caan ah oo ka dhacday Munich markay ahayd Maajo 23-keedii si aan isugu dayo inaan mar labaad u daawanno Maarso 2-da Maarso.
Fikradda ayaa ah in bisha Labaad ee Maarso ay ku beeganto "Friedenskonferenz", Febraayo 14.
Dhacdooyinka Jarmalka waxay u dhaxeyn karaan 12 iyo 14 bisha Febraayo.
12 wuxuu iman karaa Berlin, ka dibna sii wadaa Leipzig (?) Ama Frankfurt (?) Iyo 14 Munich. Sandro, Monica iyo Harald waa kuwa ka soo wareegaya Munich.
Waxay raadiyaan cidda ka shaqayn karta Berlin.
Waxaan rabnaa in aan ogaano haddii ay jiri doonto xiriirka WILPF ama ICAN ee Jarmalka.
Waxaan dooneynaa inaan abuurno koox ka mid ah dadka 20 ee Jarmalka soo jeedin kara oo diyaarin kara dhacdooyinka.
Ku lifaaq liiska xiriirada 7 ee la ururiyey xilliga Friedenskonferenz:
Waa in aad xariirtaa xiriirka.
Macluumaadka waxaa loo diraa noocyada isuduwidda.
Booqashada Baarlamaanka Yurub.
Dhibbanaha dhibbanayaasha ee Ypres xabaalaha.
Bordeaux, ururka ACDN (Citizen Action for Hubka Nukliyeerka) ayaa xiiseynaya kaqeybgalka mashruuca.
Kadib ka qaybgalka Rafa kulanka Jai Jagat Europe, Lyon, xiriiro wanaagsan ayaa la sameeyey MAN (Mouvement pour une Alternative Nonviolente).
Waxaa jira, Nice, xiriirada joogtada ah ee lala yeesho kooxo dhowr ah si ay u abaabulaan bandhig.
In Ivry sur Seine, gobolka Paris, xiriir joogto ah oo la leh degmada.
Mashruuca fariinta wadajirka ah ee Silo "Gravis ton sommetLaga soo bilaabo Toulouse, ka fikir in lagu daro bisha Maarso, iyo sidoo kale wadarta 1001 hal abuurayaasha waxbarasho farxad leh iyo ururka 'Femmes Internationales, mur brisé (FIMB)' oo leh shabakadeeda.
Geneva Macluumaadka waxaa loo diraa noocyada isuduwidda. Waxaa jira xiriiro la leh Jai Jagat Switzerland.
Athens wuxuu ahaa shirkii ugu horreeyay ee loogu talagalay 2 World March oo dad ah 50.
Waxay tarjumayaan qoraallada Giriigga.
Magaalooyinka Trieste, Vicenza, Brescia, Alto Verbano - Varese, Milan, Turin, Genoa, Ventimiglia, Florence, Perugia-Assisi, Livorno, Rome, Cagliari, Avellino, Naples, Reggio Calabria, Palermo ayaa ka qayb qaadanaya.
Waxaan isku dayi doonaa inaanu daboolno magaalooyinka 1 World March iyo qaar kale.
Waxaannu soo jeedinaynaa in loo kala qaybiyey laba qaybood EB soo socda in Italy ay u Trieste 26 / 2 / 2020 (Trieste waa dekedda nuclear u dhow saldhigga ah ee hubka nuclear Air Force Aviano 40)
Waxay ka bilaabataa Trieste - Vicenza (Xarunta Taliska Mareykanka ee Ederle iyo AFRICOM) - Brescia (oo u dhow Ghedi Air Force Base oo leh 20 hubka Atomic ah) - Alto Verbano - Varese - Milan - Turin-Genoa (ka bax Talyaani 3/3/2020 Ventimiglia-Nizza)
Wadada North North
Waxay ka bilaabmaysaa Trieste - Florence - Perugia - Assisi - Livorno (dekedda nukliyeerka, oo u dhow xarunta millatariga Mareykanka ee Camp Darby) - Rome - Cagliari (toogashada millatari ee ugu weyn Yurub) - Avellino-Naples (dekeda hubka nukliyeerka, Taliska Ciidamada Xoogga Wadaagga) ka NATO) - Reggio Calabria - Palermo (bixitaan 3/3/2020 dhanka Barcelona).
Waddo kale oo suurtagal ah
Puglia - Brindisi (deked nukliyeer) ilaa Bariga Dhexe (Lubnaan) - Qubrus (marinka suurtagalka ah ee loo yaqaan Green Line) - Waxaa loo tixgelinayaa inuu sii wado Griiga iyo Balkans halkaas oo uu kula kulmi doono kooxda ka dhisan adduunka ee Rijeka (Croatia), Caasimadda. Dhaqanka Yurub 2020 ama dib ugu soo noqo Spain.
Waxaan isku dayeynaa inaan ka qaybqaato Talyaaniga si aan ugaqeybqaato ka qaybgalayaasha Kooxda Tababarka si loo daboolo wadada la soo jeediyay si buuxda oo buuxa (oo aan kaliya ahayn).
Mediterranean, Badda Nabadda
Qaab-dhismeedka Maarso Dunida Labaad waxaan dhiirrigelinaynaa ololaha "Badda Dhexe, Badda Nabadda".
By dhamaadka October, doon taabto Genoa iyo Nice, Barcelona, ​​Tunis, Palermo, Reggio Calabria, Cagliari, Livorno iyo dhacdooyinka la soo abaabulay doonaa Matxafka Badda ee magaalooyinka kala duwan.
Shirarka waxaa la qabtay Xoghaynta Dawladda Vatican ee ku saabsan saddexda soo jeedin ee naga soo horjeeda:
Mediterranean: Badda Nabadda.
Socdaalka Nabadda ee Galbeedka Badda Dhexe waxa uu ku dhammaanayaa Genoa kaas oo u gudbi doona Civitavecchia si uu u geeyo Fatiin (ama goobaheeda ku yaal Rome) bandhigga "Ubax quruxda badda", bandhig sawirro ah oo ku yaal dusha hoose ee Badda Mediterranean.
Bandhiggaagu wuxuu noqon doonaa fursad ah kulan isbarbardhigi ah oo ku saabsan noolaha bani'aadamnimada ee Badda Mediterranean.
Waxay noqon doontaa dhacdo dhammaadkii Oktoobar ilaa bilowgii November ee 2019.
Waxaa lagu martiqaadi doonaa koox dad ah oo ka socda Kooxda Tababarka ee u safraya adduunka, waxaana suurtagal ah in la ogaado calaamad aadanaha ee nabadgelyo iyo rabshad la'aan dhalinyarada ka soo jeeda beelaha kala duwan.
Iyada oo ay joogaan wafdi, oo ay ka qayb qaadanayaan Footprints. Taariikhda la filayo: dhammaadka Febraayo / 2020.
Shirka diirada lagaga soo horjeedo dagaalka iyo rabshad la'aan
Dunida Labaad ee Maarso safarkeeda waxay ka heli doontaa xaqiiqda diinta iyo diinta kala duwan, ururinta waaya-aragnimada, markhaatiyaalka iyo dadka la kulmi kara guga 2020 ee Vatican.
Waxay noqon kartaa fursad ay ku baran karto tirooyinka tixraaca ee ku saabsan rabshadaha aan rabin midkoodna midkoodna dhegaysan ama iska indho-tirin dhinacooda aan rabshad lahayn, sida Ciise.
Dhamaadka bisha Agoosto ee 2019, oo ay weheliso kooxo kale iyo dadweynaha
Waxaad u abuuri karaa waqti ah in la helay by Aabbaha Quduuska ah (Pope Francis), kuwaas oo la kulmi doona wafdi caalami ah (xadiday) oo fariin siin karaa safarka.
Waxaan warqad rasmi ah u dirnay Xog-hayaha si aan u sheegno noocyada soo jeedinta isku-duwidda
Soo dhaweynta Pope.
Shirka Caalamiga ah ee ku saabsan rabshadaha iyo diinta.
Barcelona 3 / 3
Madrid 6 / 3 Soo dhaweynta hay'adaha.
Madrid 7 / 3 Xiritaan xiritaankii labaad ee Maarso Maarso.
Iyo Madrid 8 / 3 waxay ku soo biiraan mudaaharaadka maalinta haweenka ee 8 / 3.
Waa lagama maarmaan in dib loo xiro, macluumaadka la soo diro ama raadiyo xiriiro wadamada soo socda:
Wadamada kale ee Yurub
Si loo go'aamiyo Finland, Sweden, Denmark, Poland, Czech Republic, Romania, Austria, Luxembourg
Maaddooyinka lagu fududeeyo noocyada isuduwidda caalamiga ah iyo arrimaha kale
Waxaan horay u hirgelinay website-ka https://theworldmarch.org
Marka la eego luqadaha, waxaan codsanaynaa in aan eegno heerka tarjumaadda ee lagu fuliyay luqadaha kala duwan.
Waxaa suurtogal ah in dukumiintiyada muhiimka ah ay ku jiraan webka leh tarjumaad xirfad leh oo loo baahan yahay in lagu sameeyo luuqad kasta.
Afrikaan, Albanian, Amharic, Carabi, Ermeni, Azerbaijan, Basque, Belarusian, Bengali, Bosnian, Bulgarian.
Catalan, Cebuano, Chichewa, Shiineys (Si fudud), Shiine (Caadiyan), Kuuriyaan, Corsikiyaan, Croatian, Czech, Danish, Dutch.
Ingiriis, Esperanto, Estonian, Euskera.
Filipino, Finnish, Faransiis, Frisian, Galician, Georgian, Jarmal, Giriig, Gujarati.
Haitian Creole, Hausa, Hawaiian, Ciraaq, Hindi, Hmong, Hungarian.
Icelandic, Igbo, Indonesia, Irish, Talyaani, Japanese, Javanese.
Kannada, Afqaanistaan, Khmer, Kuuriya, Kurdish (Kurmanji), Kyrgyz.
Oo waxay sii socotaa:
Lao, Laatiin, Latvian, Lithuanian, Luxembourgish.
Makedonian, Malagasy, Malay, Malayalam, Maltese, Maori, Marathi, Mongolian, Myanmar (Burmese).
Nepali, Noorway, Holland.
Pashto, Farsi, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Ruush.
Samoan, Scottish Gaelic, Serbian, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenian, Soomaali, Isbaanish, Suudaan, Swahili, Swedish.
Taamil, Telugu, Thai, Turki, Ukraan, Urdu, Isbaanish, Fiyetnaam, Welsh, Xhosa, Yiddish, Yoruba, Zulu.
Waxaan dhamaystirnaa wajiga hubaysan ee webka. Ka dib markii la dhammeeyey marxaladan waxaanu ku dabaqi doonaa mawduuca RRSS.
Tababarada waxaa loo diyaarin doonaa kuwa ka wada shaqeynaya soo gudbinta macluumaadka.
Webka waxaa loogu talagalay in qaybaha ay awood u leeyihiin wadamada, oo ay ku jiraan magaalooyinka taas oo fududeynaysa noocyada isuduwidda ee gobollada kala duwan.
Waxaan leenahay koox si ay u taageeraan kiniisadda iyo waxyaabaha ku jira shabakadda. Waxaan ku martiqaadeynaa dhinacyada xiisaha leh inay kaqeybqaataan
Waxaan dooneynaa in aan u hawlgelinno oo aan ka dhigno kuwo aad u firfircoon.
Waxaan leenahay kanaalada 4 ee ka socda World Second World March telegram si aad u sheegto.
Waxaa jira arrimo muhiim ah oo kaliya, taariikhda wax kasta oo dhacay tan iyo bilowgii waa la hayaa, sidoo kale waa la arki karaa kuwa cusub ee ku biira kanaalka.
Waxay lahaan doonaan maamulayaal badan oo afkooda ah.
Waxaan kugula talineynaa in la abuuro koox qaarad kasta oo loogu talagalay macluumaadka degdegga ah iyo tan hadda jirta (tusaale ahaan. Waxay horay uga soo shaqeeyeen Yurub iyo Koonfurta Ameerika Maarso).
Tilmaame loogu talagalay isticmaalka kooxdu waa la diyaarin doonaa si ay u shaqeyso oo raadiso in aan la buuxin, oo is-xukun u leh xeerarka fudud ee leh 1 ama 2 maamulaha waddan kasta.
Waxaan isku dayeynaa inaan xoojinno falanqaynta aan ka helnay adduunka ee Maarso ee Facebook iyada oo la adeegsanayo isgaadhsiinta kaliya, si loo soo saaro sinerji illaa meel bannaan oo khaas ah oo caawiya horumarinta noocyada isuduwidda.
Tani waxay u oggolaan doontaa dhacdooyinkaas gaarka ah in loo yeedhiyo meelahooda iyo luqaddooda.
Waxaan leenahay Instagram channel English ah si loo xoojiyo jiilalka cusub.
Maaddooyinka: Waxaan haynaa buug yar oo Spanish ah sida loo turjumo luqadaha kale.
Wixii ku saabsan riyooyinka waa inaynu ka fikirnaa in version cusub lagu sameeyo May / 2019.
Kulanka sanadka soo socda si looga wada hadlo noocyada soo socda ee isuduwidda caalamiga ah
Waxaan qorsheyneynaa inaan qabano kulankan adduunka ee bisha June.
Categories Wargeysyo Tigidhka tigidhka
New Jersey ee Mamnuuca Hubka Nukliyeerka
Badda Mediterranean ee Midawga Yurub waxay noqon doontaa mid ka mid ah axsaabta 2ª ee Maarso Maarso